मनोरञ्जन – SUDUR MEDIA
कृष्णभक्त राईको “मुरली तिरिरि”मा सोनिया लिम्बु र एलिश राइको अभिनय ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
October 9, 2021 AdminLeaveaComment on कृष्णभक्त राईको “मुरली तिरिरि”मा सोनिया लिम्बु र एलिश राइको अभिनय ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौं – कृष्णभक्त राई र रितिश्मा लिम्बू ( कल्पना सम्बाहाङफे) को स्वरमा पुर्बेली भाकामा रहेको ‘मुरली तिरिरि’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । सरिता राइको शब्द रहेको यस म्युजिक भिडियोमा संगीत र एरेञ्ज कृष्णभक्त राइको, रहेको छ भने सागर पुनको रेकर्डिङ र कुमार सानु पुनको मिक्सिङ रहेको छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको पुर्बेली गित […]
काठमाडौं । चर्चित गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को सिजन ३ ले फाइनालिस्ट प्रतिभा पाएको छ । शुक्रबार साझ भएको भोटिङको रिजल्ट अनुसार द भ्वाइसले टप ४ प्रतिभाहरु पाएको हो । सेमिफाइनलमा द भ्वाइसको फर्म्याट अनुसार चार कोचहरुबाट एक एक जना प्रतिभाहरु फाइनलका लागि छानिएका हुन् । टिम तृष्णाबाट अफ्रिता खड्गीलाई उछिन्दै ज्वाला […]
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ आजको सेमीफाइनल हेर्नुहोस, को – को बाहिरिए ! पूरा हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
July 30, 2021 AdminLeaveaComment on ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ आजको सेमीफाइनल हेर्नुहोस, को – को बाहिरिए ! पूरा हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
निक्कै सफल र चर्चित अन्तराष्ट्रिय फ़्रेन्चाइज गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को तेस्रो सिजन सकिनै लागेको छ । यो सिजन ३ को प्रतिस्पर्धामा १ सय २० जना प्रतियोगीले भाग लिइका थिए । यस कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मण पौडेलका अनुसार प्रतियोगिताको डिजिटल अडिसनमा ४० हजार जनाले आवेदन दिएका थिए । जस मध्येबाट छानिएका १ सय २० […]
July 18, 2021 AdminLeaveaComment on ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ बाट कोच दिपको टिममा रहेका जेनिश राई बाहिरिदा थामिएन प्रतिष्पर्धी देखि कोचहरुको आँशु ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
निक्कै सफल र चर्चित अन्तराष्ट्रिय फ़्रेन्चाइज गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को तेस्रो सिजन सुरु भएको छ । यो सिजन ३ को प्रतिस्पर्धामा १ सय २० जना प्रतियोगीले भाग लिँदै छन् । कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मण पौडेलका अनुसार प्रतियोगिताको डिजिटल अडिसनमा ४० हजार जनाले आवेदन दिएका थिए । जस मध्यबाट छानिएका १ सय २० जनाले […]
July 10, 2021 AdminLeaveaComment on भ्वाइसको लाइभ शोमा कोच तृष्णाले सोनामलाई प्रपोज गरेपछि ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
निक्कै सफल र चर्चित अन्तराष्ट्रिय फ़्रेन्चाइज गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को तेस्रो सिजन सुरु भएको छ । यो सिजन ३ को प्रतिस्पर्धामा १ सय २० जना प्रतियोगीले भाग लिँदै छन् । कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मण पौडेलका अनुसार प्रतियोगिताको डिजिटल अडिसनमा ४० हजार जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्यबाट छानिएका १ सय २० जनाले शो […]
June 29, 2021 AdminLeaveaComment on बेहुलालाई नाच्दा नाच्दै एकाएक यो के भयो यस्तो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)……
छोरीले आफ्नो घर छोडेर परायाको घर जाने प्रचलन परापुर्व कालदेखिनै चलायमान प्रथा हो जसलाई बिवाह नामकरण गरियो र जुन तपाईं हाम्रो घर गाउमा चलिनेरहेको छ । छोरी मान्छे भएपछि अरुको घर जानैपर्ने अवधारणा सहित यो अनन्तकालसम्म निरन्तर रहने र सो रहेमात्रै भावि पुस्ताहरुले आफ्नो ठाउँ पाउने कुरो सत्य हो । सामाजिक संजालमा हामिले चेलिले आफ्नो […]
June 26, 2021 AdminLeaveaComment on ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को आजको ताजा एपिसोड हेर्नुहोस, कोच दिपको ठाउमा आए गायक राजेश पायल राई ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
निक्कै सफल र चर्चित अन्तराष्ट्रिय फ़्रेन्चाइज गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को तेस्रो सिजन सुरु भएको छ । यो सिजन ३ को प्रतिस्पर्धामा १ सय २० जना प्रतियोगीले भाग लिँदै छन् । कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मण पौडेलका अनुसार प्रतियोगिताको डिजिटल अडिसनमा ४० हजार जनाले आवेदन दिएका थिए । जस मध्येबाट छानिएका १ सय २० जनाले […]
June 9, 2021 AdminLeaveaComment on शान्तिश्री परियारको आवाज र अञ्जली अधिकारीको अभिनयमा नयाँ म्युजिक भिडियो सार्बजनिक ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौ । केही समय अगाडि लोक गित सस्कृति भनेपछि मुन्टो बटार्ने केही जमात थिए जस्ले यो क्षेत्र र यहा उत्पादन हुने गित खासै मन पराएको देखिदैन्थ्यो । तर आज यहि लोक गित भनेपछि हुरुक्कै हुने बेला आएको छ । नेपाली दर्शकहरु खोजी खोजी लोक गित सुन्न थालेका छन । हो आज पनि त्यही तपाईहरुले खोजेको […]
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ मा आजको ब्याटल राउण्ड ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)…..
May 14, 2021 AdminLeaveaComment on ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ मा आजको ब्याटल राउण्ड ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)…..
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ आजको ब्याटल राउण्ड ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
May 7, 2021 AdminLeaveaComment on ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ आजको ब्याटल राउण्ड ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)